Ambongadiny ny ekipanay - FES China Limited mpanamboatra sy mpamatsy
Ao amin'ny FES, mifantoka amin'ny fananganana fiaraha-miasa matanjaka sy maharitra amin'ny mpanjifa izahay.Amin'ny alàlan'ny fisintonana ny fahalalanay sy ny fahaiza-manaonay amin'ny indostria, dia manangona ekipa misy mpiasa maherin'ny 120 izahay mba hitondra vahaolana amin'ny fitaovana fototra tokana ho an'ireo mpiantoka eran-tany.Fantatry ny mpiasanay fa ilaina ny fandefasana fitaovana mety amin'ny toerana mety, amin'ny fitaterana mety, ho tonga rehefa ilaina ary amin'ny ampahany iray.
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana ny vokatra tsara indrindra avy any Shina, serivisy tsara indrindra amin'ny fenitra indostrialy avo indrindra ary fanavaozana tsy tapaka amin'ny vokatra vaovao hanampy anao hahatratra fahombiazana bebe kokoa.
Jereo ny mombamomba ny mpikambana vitsivitsy ao amin'ny ekipa fototra toy ny etsy ambany.
Ekipa Senior Leadership
toerana:Mpanorina & Filoha
Andriamatoa Robin Mao— Mpanorina sy Tompon'ny FES, dia nanomboka ny asany tao amin'ny indostrian'ny fitaovana fototra tamin'ny 1998 ho Talen'ny varotra IMT drill rigs any Shina.Nianarany tsara ny tombotsoan'ny milina fandavahana Eoropeana nahazo tombony tamin'ity traikefa miasa ity, izay nanampy azy handray anjara miavaka amin'ny fanatsarana ny milina fandavahana Sinoa amin'ny fanomezana soso-kevitra mahomby maro.
Tamin'ny 2005, Atoa Robin Mao dia nanangana ny FES— iray amin'ireo mpisava lalana nampiditra fitaovana, fitaovana ary kojakoja fanangonam-bokatra sinoa any amin'ny firenena maro ivelan'i Shina, toa an'i Kanada, Etazonia, Rosia, Emirà Arabo Mitambatra, Aostralia, Nouvelle-Zélande, Vietnam, sns.
Ny traikefany dia mahatonga azy ho za-draharaha amin'ny fitantanana orinasa anatiny sy iraisam-pirenena.Ary manantena izy fa hanampy ny mpanjifa hahomby amin'ny Quality/ Service/ Innovation.
toerana:Chief Technical Officer
Ingahy Ma Liang dia nirotsaka tamin'ny indostrian'ny pile nanomboka tamin'ny taona 2005. Manam-pahaizana manokana amin'ny vahaolana amin'ny teknolojia izy, izay efa niasa rigs mihoatra ny 100 avy any Shina sy any ivelany.Mahazatra ny marika fitaovana isan-karazany eny an-tsena sy ny fampiharana fototra lalina indrindra.
Nanomboka tamin'ny taona 2012, dia niasa ho Lehiben'ny Teknolojia ao amin'ny FES izy, tompon'andraikitra indrindra amin'ny fampiharana ny vahaolana amin'ny fandavahana amin'ny ankapobeny mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny serivisy aorian'ny varotra— ao anatin'izany ny fiofanana momba ny fametrahana/fanirahana/ fikojakojana.
Talen'ny Sampana Indoneziana
Ekipa Engineering Senior
Atoa Li Zhanling dia nirotsaka tamin'ny indostrian'ny milina fanorenana nandritra ny 20+ taona.Izy dia mahay amin'ny fizotran'ny famokarana rehetra amin'ny milina fandoroana rotary ary mahay amin'ny lafiny ara-teknika rehetra manomboka amin'ny fivorian'ny fitaovana ka hatramin'ny fandefasana, manomboka amin'ny fanaraha-maso kalitao ka hatramin'ny serivisy eny an-toerana.
Injeniera FES QC izy manara-maso ny fizotran'ny famokarana manontolo ny fitaovana XCMG namboarin'ny FES.Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, ny fitaovana FES rehetra dia tsy maintsy jerena, andrana ary ataony amin'ny fampandehanana azy mba hahazoana antoka fa tsy misy kilema alohan'ny hanaterana.Izy no miantoka ny kalitaon'ny fitaovana FES.
Atoa Mao Cheng dia manao serivisy aorian'ny varotra, ao anatin'izany ny komisiona fitaovana, fanofanana ny mpandraharaha ary ny fikojakojana milina ao amin'ny FES.Ary efa niasa tamin'ny indostrian'ny milina fanorenana nandritra ny 12+ taona.Efa nanompo mahaleo tena tany ivelany imbetsaka Atoa Mao Cheng.
Injeniera matihanina amin'ny asa fanompoana eny an-tsaha ho an'ny excavators sy ny rotary drilling rigs sns. Ny rotary drilling rigs novaina sy nohatsarainy dia voaporofo tsara avokoa amin'ny fampisehoana maharitra sy maharitra.
Mr. Fu Lei dia tao amin'ny indostrian'ny fitaovan'ny pile nandritra ny 15 taona mahery, iray amin'ireo injeniera mpisava lalana mirotsaka amin'ny rafitra hydraulika mamolavola ny fandavahana ro-tary any Shina.
Izy no mitarika ny famolavolana rafitra hydraulic ao amin'ny FES.Izy dia mahay amin'ny famolavolana / fampiharana / komisiona sy fikojakojana ny rotary drilling rigs, anisan'izany izy no tsara indrindra amin'ny fanovana fitaovana araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Fampidinana Drill Excavator Amidy, Hitachi Excavator Bucket Teeth, Pd10 Pile Driver, Auger Teeth, Sany Drilling Rig, Casagrande Drill Rig,